DLULA I-AgustaWestland AW139 FSX & P3D - Rikoooo
Usayizi 270 MB
Play 11 409
Isengezo esimangalisa kakhulu sendiza enophephela emhlane ye-AgustaWestland AW139. Lo mshini oguquguqukayo (ukuthunyelwa kwezokwelapha, ukusebenza kwamaphoyisa ahlomile, ukucisha umlilo, usizo lokuqala, njll.) Kusetshenziswa amazwe amaningi esimweni sezempi, sikahulumeni noma somphakathi.
I-cockpit yale modeli ifana kakhulu ne-helikopta yangempela. Ikhabethe lakhiwe kahle ngokuphelele ku-3D. Amathuluzi amaningi endiza asebenza njenge-FMS. Kubalulekile ukufunda imibhalo ngaphambi kokundiza le ndiza enophephela emhlane ngoba ukumbumbuluzwa kusezingeni elithuthukile kahle. Amadokhumenti ku- "Amadokhumenti" akho aqukethe amafayela alandelayo: "Uhlu lokuhlola AW139.docx", "Uhlu Lokuhlola Luhlolwe I-AW139.pdf", "FMS_guide.pdf", "Readme.docx", kanye ne- "Type_Rating_Course.pdf".
Kuhlanganiswe namamodeli amathathu nama-chiwindi amathathu: SAR, HEMS, kanye ne-HEMS ngaphandle kwamafulethi.
I-UKMIL Boeing Chinook HC2 FSX & P3D
I-Westland Merlin EH101 v2 FSX & P3D
I-Hughes 269C FSX